Iingcebiso ezili-10 ezibalulekileyo kubathengisi beNovice | Martech Zone
Ke ukulungele ukusika amazinyo akho kwilizwe elikhawulezayo, elinomdla lokuthengisa. Ukuzikhuthaza ngaphandle kwamathandabuzo kubalulekile, kodwa kuya kufuneka ulamkele neengcebiso ezivavanywe ixesha kwaye uqonde ukuba ungazisebenzisa njani kwimisebenzi yakho nakwindawo osebenza kuyo. Qhubeka ufundela izikhombisi ezisithoba ezibalulekileyo eziza kukunceda ufumane, ukhule kwaye uchume ngelixa usenza kwishishini lokuthengisa.
Yiba Nomdla -Soloko uzama ukujonga iimeko, iitekhnoloji, kunye nezinto eziqhubekayo ngenjongo yokufumana oko unokufumana kubo ukuze bakusebenzise kwintengiso yakho. Ukuba unengqondo elungileyo, incoko engaqhelekanga kunye nomhlobo wakho osenyongweni inokubangela izimvo ezintsha malunga nendlela yokukhuthaza ukhenketho lwencwadi yabathengi bakho.
Cinga Ngaphandle kwebhokisi - Njengomthengisi wentengiso, awunabudala phakathi koontanga bakho. Ngenxa yaloo nyani, ezinye zonxibelelwano kunye nezixhobo ezinokuthi zifumaneke kubantu abanamava ngakumbi ziya kuthintela kuwe ngeli xesha kwikhondo lomsebenzi wakho. Nangona kunjalo, akukho sizathu sokudimazeka. Zikhuthaze ukuba ucinge ngaphandle kwebhokisi, ngaphaya kwamaqhinga aqhelekileyo kunye nobuchule. Ubuchule bakho bunokuhlawula abathengi kwaye bafumane ukunconywa ngoontanga. Ukungena kumkhwa wokucinga ngendlela ephikisana nolindelo, qhubeka uzibuze, “Ngaba ikhona into endiyiphosayo?"Okanye"Ngaba ndingahamba ngale ndlela ngenye indlela?
Inethiwekhi NjengePro -Ukuba umtsha kumzi mveliso wentengiso, uya kuziva ubuncinci ubuncinci ngenxa yokunqongophala kwamava, kunye nolwazi ukuba abantu abaqhelananga nawe okwangoku. Nangona kunjalo, usenokubonisa abanye ukuba ukulungele ukugqwesa ukufunda indlela yokuba ngumnxibelelanisi obalaseleyo.
Nanini na xa ukwinkomfa, uncokola nabalingane kwisidlo sasemini okanye uhleli kuloliwe ngexesha lokuhamba kwakho, soloko ukulungele ukuthetha ngomsebenzi wakho. Cinga ngomntu odibana naye onokumthabatha umsebenzi ukuya kwelinye inqanaba. Gcina amakhadi oshishino ezandleni kwaye ubhale "intetho yokuhamba" enye onokuyisebenzisa xa umntu ebuza, "Ke, wenza ntoni?" Zama ukuba kukuziphatha kwakho okuhle ngalo lonke ixesha, nawo.
Ukuvela kwakho kunokubangela ukuba abantu abakwindawo yakho babenomdla wokwazi ngcono kwaye benze konke abanako ukuqhubela phambili nomsebenzi wakho, kodwa banokuba neziphumo ezichaseneyo.
Lawula imiyalezo yakho -Ukukholisa akukho lula njengokuba kunokuba kubonakala ngathi, kuba kukho izinto ongakwaziyo ukuzilawula. Ungalawula ezinye iinxalenye zemiyalezo oyithumelayo ngokusebenzisa amagama ahehayo, amabali anokuphindaphindeka, kunye nemizekelo ehlekisayo, kodwa iingqondo zabantu zikwathatha ulwazi abaluva kwaye zilunxibelelanise namava adlulileyo abadlulileyo. Awunakho ukuwulawula lo mbandela, kodwa ungasebenzisa amandla ngendlela umyalezo oqondwa ngayo.
Enye indlela yokwenza oko kukubonisa isibuko, indlela apho isithethi silingisa ulwimi lomzimba oluqatshelwe kumphulaphuli. Ukwenza isipili kunceda ukwakha ubudlelwane kunye nokwenza abantu bazive bekhululekile ebusweni bakho, kukhokelela ekubeni babe neengqondo ezivulekileyo malunga nale nto uyithethayo. Ngokwezinye izifundo, ukwanda kwentengiso ukusuka kwi-12.5 ukuya kwiipesenti ezingama-66 xa kusetyenziswa iindlela zobugcisa.
Ziqhelanise neMetriki yokuThengisa -Kukho iindlela ezithile ezilula zokuxelela ukuba ubuchule bakho bokuthengisa busebenza njengoko bekucwangcisiwe. Mhlawumbi omnye wabathengi bakho ngumculo wangaphambili weqonga elibuyela kumzi mveliso wokuzonwabisa emva kweminyaka elishumi ye-hiatus. Yitsho ukuba uqaphele ukuba isikhundla sakhe seBillboard sikhawulezisa iveki emva kokuba uqhubeke nokuthengisa iphepha elipheleleyo kwiimagazini ezinkulu kwaye uqalise iphulo le-Youtube elizinikeleyo. Kukho ithuba elihle lokuba izinto ozenzileyo ukubhengeza ukukhutshwa zikhuthaze ukusebenza kwetshathi ephuculweyo.
Nangona kunjalo, kwezinye iimeko, kuya kufuneka Thembela kwiimethrikhi ezingacacanga ukufumanisa ukuba iyanceda na into oyenzayo, okanye ukuba ngaba utshintsho luyimfuneko. Idatha malunga nokutyelelwa kwiwebhusayithi, ukuya ekhonsathini, umdla kumculi kwiindlela zosasazo zasekuhlaleni kunye nokukhutshelwa kweethoni konke oko kunokubalisa amabali ngendlela efanelekileyo yokuthengisa.
Gcina iliso kwiNkqubela phambili yeShishini -Usele ufunde ukuba kubaluleke kangakanani ukuba ube nengqondo yokuphanda kwaye uqonde ukuba phantse naluphi na unxibelelwano lunokukhuthaza umbono olungileyo malunga nomsebenzi wakho wokuthengisa. Ngokufanayo, sebenza nzima ukuhlala ngaphezulu kophuhliso lweshishini. Iijenali zorhwebo, iiwebhusayithi kunye neebhlog zibonelela ngengqondo ebalaseleyo enokukunceda ufunde malunga neendlela ezintsha ezisebenzayo ngaphambi kokuba zibe yinto eqhelekileyo. Rhuma kule ncwadi kaMartech kwaye mamela Douglas Karr's Martech Zone Udliwanondlebe nePodcast! Awuyi kukwazi ukuwaqonda onke amanqaku, kodwa ngokuhamba kwexesha uya kulwandisa ulwazi lwakho ngokucacileyo.
Thatha uKhuthazo kuBantu abaNcomekayo -Njengoko usebenza ngendlela yakho kwinqanaba lezentengiso, hlala uthobekile kwaye uhlala uziveza kwimvelaphi yabantu obathandayo. Abo bantu banokungabikho nakwishishini lokuthengisa, kodwa basenokukufundisa imigaqo eluncedo ekufezekiseni iinjongo zakho. Ukuba abantu abakukhuthazayo badumile, cinga ukukhuphela iipodcast, ukufunda i-autobiographies, okanye ukubukela udliwanondlebe lweYouTube ukufumana iinkcukacha ezithe kratya malunga nendlela ezisebenza ngayo iingqondo zabo.
Jonga iTekhnoloji yokuThengisa ngokuZenzekelayo -Ngokutsho kwabanye abahlalutyi beshishini, ulwazi lokuthengisa izinto ezizenzekelayo yi Isakhono sokufuna esinokukunceda uye phambili ngelixa ujikeleza indawo ehlala itshintsha. Ngaphandle kokuba nolwazi malunga nesihloko esixhaphakileyo, unokusebenza ngakumbi kwimisebenzi yemihla ngemihla. Ukuzenzekelayo kwentengiso kwenza ukuba kube lula ukusasaza igama, ukuvelisa isikhokelo, kunye nokunxibelelana nabathengi, ngaphandle kokuchitha ixesha ngokungabikho emsebenzini.
Bonisa umonde -Ukungxama kwakho ukwenza inkqubela phambili kunye nokufumana iziphumo zoluhlu lwabathengi bakho, unokuphelelwa ngumonde, ngakumbi ukuba kubonakala ngathi iindlela ezintsha ezisetyenzisiweyo azisebenzi. Njengoko kunzima njengoko kuya kuba ngamanye amaxesha, yiba nesimo sengqondo sokuzingisa. Akunakufane ubone iinzuzo ezinkulu ngobusuku obunye. Umonde ubalulekile, ngakumbi ngaphambi kokujonga idatha ukuze ubone ukuba ukukrokrela kwakho kuyinyani na.
Joyina iiNtengiso zoLuntu -Ukuthengisa kwangoku kuxhomekeke ikakhulu kubuchwephesha ekuhambiseni ngokufanelekileyo nasekulinganiseni izicwangciso ngezixhobo ezinqongopheleyo Izixhobo zilapha ukunceda kwaye ungafunda itoni ukubuza nje imibuzo yeengcali kuluntu lwethu. Qiniseka ukuba ujoyina ukuthengisa kuluntu lonke kwimidiya yoluntu-ngakumbi leyo ethetha kwintengiso ngaphakathi kwishishini lakho. Awuyi kuyiqonda yonke incoko- kodwa uya kuthatha iingcebiso ezilungileyo eziza kukunceda wandise ulwazi lwakho ekuhambeni kwexesha.
Wamkelekile, Ummeli omtsha!
Ndiyathemba ukuba ezi ngcebiso zilishumi zikunceda uzive uzithembile njengomthengisi omtsha. Khumbula, kwanaxa utshintsha usiya kubuchwephesha bokuthengisa usiya kwingcali eqinisekisiweyo, kuhlala kuninzi okufundwayo.
tags: ukuba ngumthengisiishishinifunda intengisourhweboIcandelo lezentengisomartechwomnathazokunxibelelanaAbathengisi abatshaabasakhasayo abasakhasayoukuthengisa intengiso